नक्कली सर्टिफिकेटमा प्रन्या जोशी नाजवाफ, कसरी आईए र एसएलसीको सिम्बोल नम्बर एउटै भयो? - A complete Nepali news portal based on news & views political, economy, sports, analytical reports, entertainment, social, national-international news
१४ श्रावण २०७५, सोमबार ०९:०४ February 24, 2019 Nonstop Khabar
एउटा परीक्षा एसएलसीको, अर्को आइएलको । तर, एउटै सिम्बोल नम्बर ३६६७ कसरी भयो भन्ने विषय त पब्लिकले पनि आश्चर्यपूर्वक हेरेको छ नि ?
त्यो पब्लिकको कुरै होइन, समितिले हेर्ने कुरा हो, मैले त्यहाँ स्पष्ट पारिसकेको छु ।
तपाईंले यो विषयमा स्पष्ट पार्न आवश्यक ठान्नुहुन्न ?
मैले आफ्नो कुरा समितिमा भनिसकेको छु । अरू मलाई थाहा छैन । मैले सबै प्रमाणहरू उपलब्ध गराइसकेको छु ।
त्यस्तै, तपाईंले दिएका विभिन्न अन्तरिम आदेशका विषयमा पनि विवाद भएको छ, प्रश्न उठेको छ, तपाईंको भनाइ के छ ?
त्यो पनि मैले संसदीय समितिमा भनिसकेको छु । विचाराधीन मुद्दामा कसैले पनि छलफल गर्न पाइँदैन ।
हाम्रो संसदीय सुनुवाइको परम्परा लामो छैन । तर, यसअघिका सुनुवाइ औपचारिकता पूरा गर्ने मात्र हुन्थे । तर, तपाईंको पाला आएर पेचिलो भयो । किन होला ?
पेचिलो भएको छैन, बनाइएको हो । बनाइएको कारण त म जान्दिनँ । तर, बनाइएको हो भन्ने जान्दछु ।
तर, न्यायालयमा एकपछि अर्को सर्टिफिकेटकै प्रश्न आउन थाल्यो, यस्तो किन भइरहेको होला ?
सामान्यतया जो कुर्सीमा बस्न पाएको हुँदैन, त्यसले केही कुराको चासो राख्छ होला । अर्काको केही खोट भेटिन्छ कि, खुट्टा तान्न सकिन्छ कि भन्ने लाग्छ होला ।
तर, एउटा प्रधानन्यायाधीशजस्तो पदमा जाने व्यक्तिमाथि यस्ता टीकाटिप्पणी हुँदा न्यायालय बलियो हुन्छ कि कमजोर ?
छानबिन गर्नका लागि जुन सुनुवाइ समिति गठन भएको छ त्यसको कार्यविधि मिल्दो–नमिल्दो आफ्नै विषय होला । छानबिन त हुनुप-यो । तर, सोध्ने मान्छेले कति सोध्ने, कति बुझ्ने, भटाभट प्रधानन्यायाधीशलाई बोलाएर कठघरामा उभ्याएजस्तो त गर्नुभएन नि । यो–यो तपाईंलाई आरोप आएको छ, तपाईंको भनाइ के छ भनेर लिखित रूपमा सोधेर लिखित जवाफ माग्नुप-यो नि । तर, त्यही मौका पनि हामीलाई दिएको छैन । मौखिक सोधिन्छ, टकाटक, टकाटक । मैले पनि ढकाढक, ढकाढक जवाफ दिएको छु । त्यो उहाँहरूलाई कत्तिको चित्त बुझ्यो, मलाई थाहा छैन ।
सांसदहरूले मिहिनेतपूर्वक तयार पारेका प्रश्न दुई/अढाइ घन्टा लगाएर सोधे, तर तपाईंले बडो उदासिन भएर १०/१२ मिनेटमै टुंग्याइदिनुभयो भन्ने टिप्पणी छ नि ?
टिप्पणी त भइहाल्छ नि, टिप्पणी नहुने ठाउँ कहाँ छ र ?
तर, सांसदहरूको प्रश्नको गम्भीरतालाई तपाईंले नजरअन्दाज गरिदिनुभयो नि ?
मैले दिएको जवाफ त गतिलै छ भन्छु म । प्रस्टै जवाफ दिएँ भन्ने लागेको छ मलाई । अरु उहाँहरूको विचार हो, मैले के भन्ने ?
यो समग्र प्रकरणले न्यायालयलाई बलियो बनायो कि कमजोर ?
के बनायो भन्ने कुरा अहिले भन्न सक्दिनँ, भविष्यले बताउने कुरा हो ।
अब, सोमबार सुनुवाई समितिको बैठक बस्छ, पहिलो विकल्प समितिले तपाईंको नाम अनुमोदन गर्छ । तर, अनुमोदन नगरेर अस्वीकार ग-यो भने तपाईंको विकल्प के हुन्छ ?
त्यो त म विश्वास गर्दिनँ, मलाई विश्वास छैन ।
तर, अहिलेसम्म प्रक्रिया जति लामो बनेको छ, यसले त शुभसंकेत गरेको छैन नि ?
समितिले छानविन गरिरहेको छ । उसले जे निर्णय लिन्छ, त्यसको प्रष्टिकरण पनि देला नि ? त्यसको कारण पनि देखाउनुपर्ला नि ?
यो विषय नटुंग्याएर थप छानविन गर्न उपसमिति बनाउन सक्छ नि ? त्यो सम्भावनालाई कसरी आँकलन गर्नुभएको छ ?
त्यो उहाँहरूको विषय हो मैले कसरी आँकलन गर्ने ? कानुन न्यायले दिएको काम उहाँहरूले गर्नुहुन्छ । संविधानको दायराभित्र बसेर मैले जवाफ दिने हो ।
संसदीय समितिले प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन ग-यो भने त ठीकै हो, अनुमोदन गरेन भने त न्यायाधीशकै रुपमा पनि यहाँको उपस्थितिमा प्रश्न उठ्न नि, होइन र ?
त्यो त उहाँहरूलाई थाहा होला नि, मलाई के थाहा ? त्यस्तो विषय मैले सोच्ने कुरै भएन नि अहिले । जाँच दिएको मान्छेले पासै हुन्छु भन्ने सोच्छन् । म त रिजल्टको प्रतीक्षामा छु ।
तपाईं आफुले जति जवाफ दिनुभयो, त्यसमा सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
म त सन्तुष्ट छु ।
अरु तपाईंलाई केही भन्नु छ कि ?
मेरो भन्नु के ? तपाईंहरूलाई शुभकामना छ ।